Thursday March 21, 2019 - 09:49:35 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dowladda Mareykanka ayaa sare uqaadday duqeymaha ay ku beegsanayso muslimiinta oo ay ka geysanayo dalka soomaaliya, warbixinno ay soo saareen hay'ado iyo Ururro reergalbeedka ayaa wajiga ka fayda dhagaraha gurrucan ee mareykanku ku hayo muslimii
48-kii saacadood ee lasoo dhaafay ayay warbaahinta ugu caansan Mareykanka iyo qaaradda Yurub waxay daabacayeen warbixinno ay soo saareen hay;adaha sheegta in ay udoodaan xuquuqul insaanka kuwaas oo soo bandhigay waxyar oo kamid ah tacadiyada ciidamada Mareykanka ay ka wadaan soomaaliya.
Hay'adda Xasaradaha adduunka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaan ICG ayaa sheegtay in warbixinno ay heshay sheegayaan in duqeymaha Mareykanka ee Soomaaliya sanadkaan kaliya ay gallaafteen nolosha ugu yaraan 20 qof.
ICG waxay caddeysay in duqeymuhu ay yihiin kuwa beegsanaya isku imaatinada shacabka iyo dadka beeralayda ah ayna khilaafsanyihiin waxa uu mareykanku ka sheegto soomaaliya.
mas'uuliyadda gummaadkan waxaa dhabarka uridanaya saraakiisha taliska ciidamada AFRICOM ee fadhigoodu yahay wadanka Jabuuti taliskaa oo Trump uu uxilsaaray dagaalka ka socda dalka soomaaliya.
hay'adda ICG ayaa ku eedaysay wasaaradda difaaca Mareykanka in ay marwalbo diido dib u eegis iyo baaritaanno ay ku sameyso duqeymaha aan ka fiirsiga laheyn ee Soomaaliya.
dhacdadii ugu dambaysay ayaa maalin ka hor ka dhacday deegaanka Caddoow dibile ee duleedka degmada Afgooye halkaas oo diyaarad drone-ka ay ku duqeysay gaari ay la socdeen dad shacab ah.
Sidii caadada u aheydba dowladda Mareykanka ayaa markale sheegatay duqeyn ay dad shacab ah ku dishay oo ka dhacday deegaan katirsan gobolka Sh/Hoose.
Dowladda Mareykanka ayaa duqeymo joogta ah oo ay ka geysatay gobollada dhaca Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya waxay ku gummaaday dad shacab ah marwalbana waxay ku doodaa in ay dishay ciidamo katirsan Al Shabaab.
Warbixin ay soo saartay hay'adda Amnesty International waxay ku sheegtay in Duqaymaha mareykanku Soomaaliya ka fuliyo uu ku laayay dad shacab ah islamarkaasna ay beentahay sheegashadiisa ku aaddan inuusan wax gaarsiin dad shacab ah.
Warbixin ka kooban 73 bog ayay Amnesty International ku sheegtay in si qarsoodi ah uu mareykanku Soomaaliya uga geystay 100 duqeymood oo badankood uu ku gummaaday dad shacab ah, Sidoo kale ciidamada Mareykanka ee qeybta ka ah duullaanka saliibiga ee Sonaaliya lagusoo qadaay ayay warbixintu sheegaysaa in 76 duqeymo kale oo dheeraad ah eey gesteen.
duqeymahaas ayay hay'adani sheegtay in lagu gummaaday dad farabadan walina uu mugdi badan ku jiro howsha ciidamada Mareykanka ay ka wadaan Soomaaliya.
Amnesty waxay sheegtay in xogta baaritaanka oo ay ka heshay safaro kala duwan oo ay ku bixisay dalka Soomaaliya, sawirroo uuuu qaaday Saterlite-ka ama dayax gacmeedka iyo wareysiyo ay la yeelatay ilo mareykanka ah iyo dhaqaatiir daweeyay qaar kamid ah dadkii ku waxyeelloobay duqeymaha cadowtooyo ee ka dhacay gobollo dhaca koonfurta dalka.
Sida ay Sheegtay Amnest duqeymaha mareykanka ee Soomaaliya ayaa aad ukordhay wixii ka dambeeyay markii uu Trump ku dhawaaqay in Koofurta Soomaaliya tahay dhul colaadeed sanaddii 2017.
hay'adda warbixinta soo saartay ayaa sheegtay in Mareykanku sanaddii 2017 uu dalka Soomaaliya ka geystay 34 weerar kuwaas oo ka badan kuwii uu geystay 2012 - 2016. sidoo kale sanaddii 2018 ayey sheegtay in uu geystay 47 weerar hase yeshee waxay carabaawday in 2019 - 2-bil ee u horreysay oo kaliya uu geystay 24 weerar.
Goobaha ay beegsadeen duqeymaha diyaaradaha waxaa kamid ah goobaha caafimaad sida isbitaalka degmada saakoow,guryo dad shacab ah deganyihiin,beero iyo goobo ganacsi iyo dugsiyo quraa'nka lagu barto.
Sarkaal shaqada ka fariistay oo ay wareysatay Amnesty ayaa sheegay in Trump uu go'aamiyay in la beegsado qof kasta oo qaan gaar ah kuna nool wilaayaatka islaamiga ah ee Al Shabaab maamulaan.
Amnesty ayaa tusaale u soo qaadatay tuulo lagu magacaabay Farax Wacays halkaas oo ay sheegtay in Mareykanku dadkii uu dilay iyo kuwii uu ku dhawacay dhamaantood uu ku sheegay Al-Shabaab halkaas oo ay Amnesty ka diiwaan galisay in lagu dilay 5 haween ah 2 nin iyo carruur oo dhamaantood ahaa dad shacab ah.
Nin lagu magacaabo cabdullaahi Xasan oo ah madaxa Amneysty ee Soomaaliya kaalin weynna kulahaa soo aruurinta warbixintan ayaa ka sheekeynaya sida diyaaradaha aan duuliyaha laheyn uu mareykanku shacabka ugu gummaado.
Halkan ka degso Nuxurka Warbixinta Amnesty Ee duqeymaha diyaaradaha Mareykanka Soomaaliya